Dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay ka hortageyso banaanbaxyada - Awdinle Online
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay ka hortageyso banaanbaxyada
Wasiirka Amniga Xukuumadda Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale oo la hadlay Warbaahinta Dowladda ayaa ka hadlay Dibadbax Rabsho isu badalay oo sababay khasaare gaaray qaar kamid ah dadkii bannaan-baxayay.
Xundubey ayaa sheegay in aysan jirin wargelin Wasaaradda Amniga lagu sameeyay in dibadbax uu dhacayo, sidaas awgeed aan la aqbali doonin isu soobax aan ogolaanshiyo looga heysan Wasaaradda shaqada ku leh.
Wasiirka Amniga Xukuumadda Soomaaliya Jimcaale ayaa tilmaamay in sifaha dibadbaxa uu leeyahay ay tahay nabad & dareen muujin si aan qalalaase ku dheehneen, balse haddii sidaas uu ka duwan yahay wax ka qabasho uu mudan yahay.
“Mudaharaad waala yaqaan waa dad cabanaya oo ay dowladdu ogtahay oo ammaankooda la sugayo, iyagana aan waxba geysan, balse dad wax magarad ah oo hub wata in jidadka lasoo dhoobo waa dagaal lagu soo qaaday dhanka amniga, dadkii ku dhintay waxaa mas’uuliyaddeeda iska leh oo dusha saaranaysa ciddii soo abaabushay” ayuu yiri Wasiirka Amniga Soomaaliya.
Wasiirka Amniga Soomaaliya ayaa ugu dambeyn sheegay in Laamaha ammaanka ay gudanayaan waajibaadka ka saaran kahor-tagga dadka ku howlan falalka Xasiloonida dhaawaca ku ah.
Previous articleXiisad dagaal oo ka dhex taagan Ciidamada dowladda & kuwa Kenyan ah
Next articleDhageyso:-Guddoomiye Filish oo digniin soo saaray bannaanbaxyada ka dhacaya Muqdisho